Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta u ambabaxay dalka Talyaaniga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta u ambabaxay dalka Talyaaniga
2nd September 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka Talyaaniga, halkaasoo uu kaga qeyb geli doono Bandhiga Carwada Caalamiga ah oo muddo lix bilood ka socotay magaalada Milano.
Bandhig carweedka ayaa waxaa qeyb ka ah madax loogu magac daray Madasha Maalgashiga Soomaaliya, kaasoo maalinta berri dhici doonta, waxaana sidoo kale jiri doonta maalin gaar ah oo ay leedahay Soomaalida, laguna soo bandhigi doono waxyaabaha ay caanka ku tahay Soomaaliya.
Ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka qeyb geli doona Bandhig carweedka magaalada Milano, waxaana ay soo bandhigi doonaan, qorshayaasha xilligan lagu maalgashan karo Soomaaliya iyo wax soo saarka dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa 4-ta bishan magaalada Rome kula kulmi doona Madaxweynaha Talyaaniga, iyagoo ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerda Talyaaniga ay siineyso dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM.
Wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku sii sagootiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Madaxweynaha Maamulka C/kariin Xuseen Guuleed iyo Mas’uuliyiin kale.
Bandhig carweedka Milano oo furmay 1-dii May ee sanadkan ayaa socon doono 31-ka bisha October, waxaana ka qeybgalay in ka badan 145-dal, iyadoo dal waliba uu xafladda ku soo bandhigi doono awoodda xagga wax soo saarka iyo horumarka uu ka gaaray xagga teknoloojiyadda.